काँग्रेसमा खसआर्यतर्फ बुढाथोकीको सर्वाधिक मत, बाँकी ६ जनाको कति आयो मत ? | Ratopati
काँग्रेसमा खसआर्यतर्फ बुढाथोकीको सर्वाधिक मत, बाँकी ६ जनाको कति आयो मत ?
काँग्रेसको खसआर्य खुल्लाबाट ७ जना केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका छन् । देउवा समूहबाट केशवकुमार बुढाथोकी २११५, गोविन्दबहादुर शाह २०७३, भीम पराजुली १९४७ , श्यामकुमार घिमिरे १९१९, नारायणबहादुर कार्की १८३६ र गेहेन्द्र गिरी १८०३ मत ल्याएर निर्वाचित भएका छन् ।
खस आर्य ८ जनामा शेखर कोइराला प्यानलका मधु आचार्य १८४९ मत ल्याएर विजयी भएका छन् ।